12 Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 24/05/2021)
Avy amin'ny sarimihetsika ankafizin'ny olona eropeana “velona ny havoana miaraka amina feon-kira”. Ity tokoa ity manaraka ity 12 hampihira anao ny tendrombohitra ary handihiza ny fonao. Avy amin'ny Alpes sy Pyrenees malaza ka hatramin'ny harena miafina an'ny Repoblika Tseky, hiaraka aminay amin'ny dia an-tongotra mankany 12 ny ankamaroan'ny tendrombohitra tsara tarehy any Eropa.
1. Matterhorn Mountain any Suisse
Avy eo Gornergat ka hatrany an-tampon'ny tendrombohitra Rothorn, Matterhorn dia azo ankafizina na aiza na aiza ao Zermatt. Matterhorn snowy cap sy ny endrika telozorozy, mamorona fahitana an-tendrombohitra mahavariana tsy mampino.
Amin'ny lohataona na ririnina, Matterhorn malaza dia toerana fialantsasatra mahafinaritra any an-tendrombohitra. Azonao atao ny mahita an'i Matterhorn ao amin'ny Alpes Soisa ary misafidy fiakarana 4,478 metatra, mankany amin'ny fitsangantsanganana amin'ny làlana malaza indrindra avy any Zermatt mankany Hornli Hut.
Ny fitsangatsanganana Matterhorn dia iray amin'ireo fiakarana malaza indrindra any Eropa, lalina ao anaty ala maitso Soisa. Noho izany, hanana toerana marobe ianao ho an'ny snaps mahafinaritra sy misarika ny fofonainao rehefa mankafy ny hakanton'ny natiora.
2. Jungfrau Ao amin'ny Lohasaha Lauterbrunnen, Soisa
Ao amin'ny lohasaha Lauterbrunnen tsara tarehy sy ny tanin'ny 72 riandrano, ho hitanao ny tandavan-tendrombohitra Jungfrau mahafinaritra. amin'ny 4,158 metatra, Jungfrau no tendrombohitra avo indrindra amin'ny Alpes Bernese.
indray, azonao atao ny misafidy ny hianika na hankafy ny fahitana any an-tendrombohitra Jungfrau mahafinaritra avy amin'ny fiaran-dalamby avo indrindra any Eropa. Manomboka amin'ny lafiny iray Mittelland ka hatrany Vosges, ary ny glacier Aletsch amin'ny ilanao hafa, mahatalanjona tokoa.
3. Grossglockner any East Tyrol, Aotrisy
Ilay tendrombohitra Grossglockner avo indrindra dia voahodidin'ny 266 tampon-tendrony kely amin'ilay antsoina hoe tampon'osteria. Ity tandavan-tendrombohitra ity dia mamorona iray amin'ireo fahitana tendrombohitra mahatalanjona any Eropa. Ny Grossglockner dia mijoro eo 3,798 metatra, ary Grossvenediger ao amin'ny 3,666 metatra, mamorona iray amin'ireo fahitana tendrombohitra tsara tarehy indrindra any Aostralia.
Ho hitanao ireo 2 giants any Hohe Tauren valan-javaboary. Eto ianao dia afaka mandeha bisikileta an-tendrombohitra, fitsangantsanganana na fiakarana vato. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mankafy ny fomba fijery mahafinaritra amin'ny lafiny rehetra.
Vienna mankany Landeck Ischgl Miaraka amina lamasinina
Munich mankany Landeck Ischgl Miaraka amin'ny lamasinina
Salzburg mankany Landeck Ischgl Miaraka amina lamasinina
Zurich mankany Landeck Ischgl miaraka amina lamasinina
4. Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa: Avo Dachstein Ao Aotrisy
Ny tendrombohitra avo indrindra faharoa any Aotrisy dia Hoher Dachstein, hita ao amin'ny tanàna Halstatt mahafinaritra. Hoher Dachstein dia manolotra fomba fijery an-tendrombohitra sy farihy mahafinaritra indrindra amin'ny ririnina sy fahavaratra. Amin'ny fahavaratra, hankafy ny tendrombohitra karst maitso sy mamelana ianao. In ririnina, mandehana manao ski ambony avy eo an-tampon'ny tendrombohitra.
Na izany aza, ny fahitana tendrombohitra tsara indrindra any Hallstatt dia tokony ho ao amin'ny 5 Fingers point of Farihy Hallstatt. Raha mitsidika manomboka aprily ka hatramin'ny septambra ianao, manaova sosona ririnina mafana, satria mbola mety ho ny lanezy sy ny hatsiaka amin'izao vanim-potoana amin'ny taona izao. Azonao atao ny manatona an'io fomba fijery mahatalanjona io amin'ny alàlan'ny tariby tariby raha tsy tianao ny mitsangatsangana hatrany amin'ny traikefa mahafa-po sy mahaliana kokoa.
5. Chamonix-Mont-Blanc, Frantsa
Ny Chamonix no tendrombohitra avo indrindra any Alpes. Just 15 minitra miala ny sisintany, Chamonix dia tanin-dririnina. Eto, hotifirina ianao amin'ny fahitana mahafinaritra an'i Mont Blanc.
Afaka manao ny lamasinina Mont Blanc ianao, na mankafy ny fomba fijery mahafinaritra avy amin'ireo kafe sy trano fisakafoanana ao amin'ny tanànan'i Chamonix. Ankoatry ny, afaka mitsangatsangana mankany Aiguille du Midi na mankany Mer du Glace ianao. Na hetsika fidinao, ny fijery an-tendrombohitra mahatalanjona an'izay tendrombohitra tsara tarehy indrindra eto Frantsa dia hiaraka aminao hatraiza hatraiza.
6. Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa: Ny Pyrenees
Ireo Pyrenees mahatalanjona dia manome ny fomba fijery tsara indrindra avy eny an-tendrombohitra. Ny tendrombohitra fito dia any Frantsa, ny Vosges, ny Jura, ny Massif Central, ny Massifican Massif, ary ny Massif Corsican.
Goavana tokoa ity tandavan-tendrombohitra ity ka mila mandeha an-tongotra avy any amin'ny Oseana Atlantika ka hatramin'ny ranomasina Mediterane ianao. Tsy vitan'ny hoe afaka mitsidika tanàna taloha mahaliana ianao, fa ianao koa hanana ny vidy tsy voavidy sarobidy hijerena fahagagana voajanahary hafa. Ity fahagagana ity dia mazava ho azy ny renirano Grande Cascade de Gavarnie na Gavarnie. Miaraka amin'ny rano indray mitete 422 metatra, io no riandrano faharoa avo indrindra any Eropa.
Ary noho izany, ny sary dia ho tonga National Geographic tonga lafatra.
7. Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa: Val Thorens Any Frantsa
Avo amin'ny 2300 metatra amin'ny Alpes frantsay, ny tendrombohitra feno lanezy Val Thorens no tendrombohitra tsara tarehy indrindra amin'ny ririnina. Atsofohy ny lemaka, manana kaopy kakao mafana eo anilan'ny afo, na mankafy ny fomba fijery avy amin'ny fiara tariby, mahatalanjona tokoa ny fahitana.
Na izany aza, raha ny ankamaroan'ny dia mankany Val Thorens hanao ski, tena mahavariana amin'ny vanim-potoana hafa io. Ny Tranon'ny Tarentaise dia feno trano fonenana mahafinaritra, ny kijana, ary ny ony Isere, miaraka amin'ny tendrombohitra Val Thorens any aoriana, mamorona sary mahafinaritra mba hahafinaritra anao mandritra ny taona.
8. Ny Dolomites any Italia
Rehefa afaka misafidy 7 teboka hijerena, tena mahavariana eo amin'ny tontolo iainana ilay toerana. Ny tendrombohitra Dolomites dia mipaka any atsimon'i Italia, dia iray amin'ireo tahiry voajanahary tsara tarehy indrindra any Eropa. Ary, io no iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana malaza indrindra eto an-tany.
Azonao atao ny misafidy ny hankafy ny Dolomites amin'ny dia iray andro avy any Bolzano, na amina boribory 20 kilometatra. Ireo hetsika, toerana fitsangantsanganana sy sary, ary tongotra lavitra lalana, dia tsy misy farany. Mba hahatongavan'izany rehetra izany, manaitra tokoa ny fomba fijery, amin'ny fotoana rehetra amin'ny dianao.
Noho ny antony rehetra voalaza etsy ambony, ny Dolomites no toerana mety indrindra amin'ny fialan-tsasatra any an-tendrombohitra Italiana.
9. Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa: Mount Snowdon any Wales
Kanto tokoa i Mount Snowdon ka tsy mahagaga raha manana ny fampiharana azy manokana. Snowdon dia any Wales no misy azy, ary rehefa afaka a 6-8 fitsangatsanganana ora maro, afaka mankafy ny fomba fijery mahavariana an'i Snowdonia ianao, Anglesey, Pembrokeshire, ary Irlandy.
Ankoatry ny, avy amin'ny haavon'ny 1085 metatra, ho afaka ihany koa ianao jereo ny farihy tsara tarehy rehetra. Ohatra, ny farihy Cwellyn sy Mynydd Mawr dia manome fahitana mahatalanjona any amin'ny faran'ny farihy Cwellyn..
10. Adrspach-Teplice any amin'ny Repoblika Tseky
Ny Repoblika Czech dia malaza amin'ny Prague tsara tarehy. Vitsy dia vitsy no mahalala momba ny tanàna Bohemia mahafinaritra sy rock, Adrspach-Teplice. Eo akaikin'ny sisin-tany poloney i Adrspach ary mendrika toerana onenana tanteraka Fahagagana voajanahary mahatalanjona any Eropa.
I Adrspach-Teplice dia tanàna iray miorina eo afovoan'ny fiforonan'ny vatolampy, manangana avo, miaraka amin'ny labyrint, renirano volomboasary, sy lalana. Tao amin'ny 1824. Nanomboka teo dia toerana manokana nalehan'ny mpandeha nitady izay tsy manam-paharoa.
Eto, afaka mandeha amin'ny lalan'ny loop ianao, amin'ny alàlan'ny vavahady Gothic sy ny làlana miafina. Tsy misy toa ny mankasitraka ny fisian'ireo vatolampy mahatalanjona avy ao anatiny ka tonga any amin'ny farihy manga. Satria handeha eo afovoan'ireto vato goavambe ireto ianao, tsara kokoa ny mitsidika amin'ny fahavaratra, rehefa lava kokoa ny andro ary be ny jiro.
11. Faritra Mullerthal any Luxembourg
Miaraka amin'ny sasany amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Eropa, ny tendrombohitra Mullerthal any Luxembourg dia manolotra làlana mahafinaritra sy toerana miafina miafina. Rehefa mandeha any anaty ala ianao, nandalo ny farihy sy loharano, havoana feno vato maitso, ho hitanao fa niditra an-tsehatra amin'ny angano ankizy ianao.
Ny faritra Mullerthal dia manana ny sasany amin'ireo endrika manokana sy fomba fijery miavaka any Eropa. trano fiarovana, lava-bato, tetezana, sy riandrano, misy fomba fijery mahafinaritra na aiza na aiza no itodihanao. Noho izany, fitsangantsanganana na bisikileta, aza hadino ny manao andro vitsivitsy farafaharatsiny, hankafy ny fahitana an-tendrombohitra mahafinaritra an'i Mullerthal.
12. Tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eropa: Stanserhorn, Soisa
Tendrombohitra feno lanezy, havoana maitso mavana, ary trano kely mahafinaritra any an-dohasaha, ny fomba fijery avy any Stanserhorn no mahafinaritra indrindra. Ny tendrombohitra Stanserhorn tsara be dia be 20 minitra miala an'i Lucern amin'ny lamasinina ary manao dia mahafinaritra mandritra ny andro Soisa tsara tarehy.
Eto ianao dia afaka mitondra ny tariby tariby hatrany an-tampon'ny tendrombohitra hahita fomba mahatalanjona mahatalanjona momba ny Alpes sy farihy Suisse. Fomba tsara iray hafa hahafahana mankafy ny fahitana an-tendrombohitra manintona an'i Stanserhorn dia amin'ny fakana a toerana fitsangantsanganana. Amin'izay ianao dia handany andro miala sasatra sy miaina amin'ny hatsarana sy ny Alpes’ rivotra madio.
eto amin'ny Save A Train, Ho faly izahay manampy anao handamina ny fialan-tsasatrao ho an'ny 12 ankamaroan'ny tendrombohitra tsara tarehy any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay "Tendrombohitra 12 mahafinaritra indrindra any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao?? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2FNyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Bestnaturereserveineurope MountainRange Tendrombohitra MountainViews tsara tarehy PicturesqueMountains Scenicview